December 1, 2021 - Achawlaymyar
ေယာကၡမျဖစ္သူမွ ေခြၽးမအသစ္စက္စက္ေလးအား ပန္ကာေလးဖုန္တက္ေန၍ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခိုင္းလိုက္မိရာ ေရဇလုံထဲမွာစိမ္ၿပီး ဘလက္ႀကီးနဲ႔ အားရပါးရ တိုက္ေဆးခဲ့သည့္အျဖစ္
December 1, 2021 by Achawlaymyar
မိန္းကေလးတိုင္းက အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသည္ႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအိမ္ေနာက္လိုက္ေနရသည့္အခါ ေယာကၡမျဖစ္သူဆီကေန အျမင္ၾကည္ေစရန္ ခ်ီးက်ဴးတာမ်ိဳးခံခ်င္ၾကၿပီး အိမ္မႈကိစၥေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ အိမ္တြင္ ဇိမ္နဲ႔ေနရၿပီး မိခင္ျဖစ္သူခ်က္ေကြၽးသည့္ ထမင္းဟင္းကိုသာ အဆင္သင့္စားခဲ့ရာ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဘာတစ္ခုမွ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလးသည္ အိမ္ေထာင္က်ေသာအခါ ခင္ပြန္းျဖစ္သူေနာက္ လိုက္ပါသြားရစဥ္ ေယာကၡမျဖစ္သူမွ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ကူခိုင္းၿပီး ပန္ကာေလးမွာ ဖုန္တက္ေန၍ သန္႔ရွင္းလိုက္အူးဟု ဆိုခဲ့ရာတြင္ ေယာကၡမျဖစ္သူဆီမွာ အသန္႔ဆုံးျဖစ္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အမွတ္ယူခ်င္၍ ေရဇလုံႀကီးထဲတြင္ ပန္ကာကို နစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘလက္ႀကီးတစ္ျခနဲ႔အတူ ပန္ကာေလးကို စိတ္ရွိတိုင္း မေျပာင္ေျပာင္ေအာင္ တိုက္ခြၽတ္ခဲ့ရာ ေယာကၡမျဖစ္သူမွ ျမင္ၿပီး ေခြၽးမေလးအား ေျပာစရာစကားမရွိေတာ့ေလေအာင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္းတစ္ေယာက္ ပီသလြန္းတယ္ဆိုၿပီး ေဒါသထြက္မည့္အစား ရယ္ေမာကာ … Read more
ရင်းနှီးငွေပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မလိုဘဲ စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး
ရင်းနှီးငွေပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မလိုဘဲ စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ မူပိုင်ရောင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ထွန်းကားနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတစ်လုံး ရှိရုံနဲ့ကုမ္ပဏီထောင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ တစ်ချိန်က American Dream ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ စီးပွားရေးအသို က်အမြုံကောင်းတစ်ခုကို ရွှေတွင်းတူးသလို တူးချင်တဲ့ လူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သန်းနဲ့ချီတဲ့ အမေရိကန်တွေ ချမ်း သာကြွယ်ဝခြင်းဟာ ရွှွေတွင်း၊ ငွေတွင်းတွေ တူးမိလို့ချမ်းသာခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်လည်း ချမ်းသာတဲ့သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သူ့ဦးနှောက်ထဲက ရတနာသိုက်ကို ဖောက်နိုင်ပြီ ဆိုရင်ပေါ့။ သင့် ဦးနှောက်ထဲမှာ ဘယ်လိုရတနာတွင်းရှိသလဲဆိုတာကို ဒီလုပ်ငန်း (၆) ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် နိုင်ပါတယ်နော် (၁) အိမ်တွင်းလက်မှု ဖန်တီးချက်လေးများ တကယ်တော့ လူတိုင်း … Read more
” အင်တာပို ၊ အာဂျင်တီးနား တရားရုံးတွေရဲ့ တွန်းအားနဲ့ အမေစုအမှု့ကို အမိန့်ချဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တဲ့ စစ်ကောင်စီ ” မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အမိန့်ချဖို့ကို တရားရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ် ။ ရွှေ့ဆိုင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုတော့ စစ်တပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အဖြေမပေးခဲ့ပါဘူး ။ ကိုဗစ် နိုင်တင်း ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အမှု့ကို အရင်ဆုံးချမှတ်နိုင်ပါတယ် ။ စွပ်စွဲချက်မှာ မနှစ်က မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အတွင်း အိမ်အရှေ့ကဖြတ်လာတဲ့ စည်းရုံးရေးယာဉ်တန်းကို လက်ပြနုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်လို့ အကြောင်းပြထားပါတယ် ။ ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခံထားရတဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နေပြည်တော် မြို့တော်ဝန် ဦးမျိုးအောင်တို့ကိုလည်း ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံထားရတာပါ ။ သို့ပေမယ့် … Read more
မြန်မာနိုင်ငံ အအေးလှိုင်းဖြတ်မည့်အချိန်ကြေညာပြီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါ
ျမန္မာနိုင္ငံ အေအးလွိုင္းျဖတ္မည့္အခ်ိန္ေၾကညာၿပီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကပါ 2022 ဇန္ န ဝါ ရီ လ တ တိ ယ အ ပတ္မွာ ေတာ့ ျမန္ မာ အ ပါ အ ဝင္ အာ ရွနိုင္ ငံ အ ခ်ိဳ႕ကို ေလ ေအး စီး ေၾကာင္း ေတြ ျဖတ္ လာ နိုင္ ၿပီး ေတာ့ အ လြန္ ေအး နိုင္ တယ္။ ဒီ ဇင္ ဘာ လ မွာ ကို မြန္ ဂို ရီ ယား နိုင္ ငံ ေျမာက္ ဘက္ … Read more
ယွန်းယွန်းရဲ့အသံဖိုင်ပြန့်လာတဲ့ ကိစ္စကို အချက်အလက်နဲ့ ဖြေရှင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ မြတ်နိုးအိမ်
ယွန်းယွန်းရဲ့အသံဖိုင်ပြန့်လာတဲ့ ကိစ္စကို အချက်အလက်နဲ့ ဖြေရှင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ မြတ်နိုးအိမ် ဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး စည်သူဝင်းကတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်သူဝင်းက ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေတဲ့ Double Dating အစီအစဥ်လေးမှာလည်း ပါဝင်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေတော်တော်များများစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြမှာဖြစ်သလို လူမှုကွန်ယက်ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားပြီး အောင်မြင်မှုတွေအများဆုံးရရှိထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ချစ်စရာကောင်းပြီး လိုက်ဖက်လွန်းကြတဲ့စုံတွဲလေးတွေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အောင်မင်းခန့်နဲ့ ယွန်းယွန်း၊ စည်သူဝင်းနဲ့သဇင်ထူးမြင့်တို့ အတွဲလေးတွေကတော့ တကယ်ကိုအတွဲညီလွန်းကြတာမို့လည်း ပရိသတ်တွေအားလုံးက အချစ်ပိုနေကြတာပါ..။ လတ်တလောမှာတော့ စည်သူ၀င်းရဲ့ လက်ရှိအချစ်ရေးအရှုပ်အထွေးတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်များကြားပွဲဆူနေတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ” ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေလဲ? အကျင့်ဖောက်ပြားပြီး လူမှုရေးဖောက်ပြန်တာ သူတို့လေ ငါ့ဟာငါ ရင်နာခွင့်မရှိဘူးလား? သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး လား? ပြန့်သွားအောင် ငါဖြန့်တာလဲ မဟုတ်ဘူး … Read more
မကြာသေးမီက Sar Calva အမည်ရှိအမျိုးသမီးဟာ အခြားသူများအတွက် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့မိသားစုရဲ့ဇာတ်လမ်းကို ပို့စ်တင်ပြီး မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမတို့မိသားစုဟာ ယခင်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး လူအများစုရဲ့အိမ်များနှင့် ဝေးကွာတဲ့တဲအိမ်မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူမတို့အိမ်မှာ လျှပ်စစ်မီးတောင်မရှိပေမဲ့ မိဘများက ၎င်းတို့ဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲများကို မညည်းညူခဲ့ကြပါဘူး။ ထို့ကြောင့် မိဘများက မိသားစုဝင်များစွာနှင့် လျှပ်စစ်မီးမရှိတဲ့တဲအိမ်လေးကို မျှဝေရန် မည်မျှခက်ခဲတာကို ညည်းညူနေမည့်အစား ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်များ ဆောက်လုပ်ရန်သာ အိပ်မက်မက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူမတို့မွေးချင်းကိုးယောက်ကလည်း ၎င်းတို့ရဲ့မိဘများအတွက် အိမ်ဆောက်ပေးဖို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆင်းရဲပေမယ့် သူမရဲ့မိဘများက ပညာရေးရဲ့တန်ဖိုးကို နားလည်ကြပါတယ်။ . ဆင်းရဲတဲ့မိဘများစွာက ၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးများကို ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက မိသားစုကိုကူညီဖို့ အလုပ်ခိုင်းတတ်ကြပေမဲ့လည်း သူမတို့ မိဘများကတော့ ထိုသို့မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ယင်းအစား သူမတို့ရဲ့မိဘများက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအိပ်မက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စေရန် သူမတို့အားလုံးကို ကျောင်းတက်စေခဲ့ပါတယ်။ . အမှန်ပါဘဲ ၊ တကယ်လည်း … Read more
မေႏၲလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္႐ြိ ဆရာဝႏ္အိမ္ အႏုၾကမ္းစီးခံရ
မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ ဆရာဝန္အိမ္ အႏုၾကမ္းစီးခံရ မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အႏုၾကမ္းစီးခံရၿပီး အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ဓားထိုးခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၃၁ လမ္း၊ ၇၄ လမ္းႏွင့္ ၇၅ လမ္းၾကားရွိ ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ ေနအိမ္ အႏုၾကမ္းစီးခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎အားတပည့္ျဖစ္သူက အႏုၾကမ္းစီးၿပီးဓားျဖင့္ ထိုးသြားေၾကာင္းသိရသည္။ “ဆရာကအိမ္ထဲရွိေနခ်ိန္မွာ သူ႔တပည့္က ပစၥည္းလုယက္တာပါ၊ ေျမစာခ်ဳပ္ကိုလည္း အတင္းလက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ဓားနဲ႔လည္းထိုးတယ္၊ ဆရာက ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းႏိုင္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းေတြက ဝင္ဖမ္းတယ္၊ အဲေကာင္ကိုဖမ္းမိတယ္၊ ဆရာ့ကိုေတာ့ ေဆး႐ုံပို႔ထားရတယ္”ဟု အခင္းျဖစ္ေနအိမ္ မိသားစုႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲဝန္းက်င္က ဆရာဝန္တစ္ဦးတည္း ေနအိမ္အတြင္းရွိေနစဥ္၊ တပည့္ျဖစ္သူ ေရာက္လာၿပီး အႏုၾကမ္းစီးလုယက္ကာ ဓားျဖင့္ပါထိုးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓားထိုးခံရသည့္ ဆရာဝန္သည္ စိုးရိမ္ဒဏ္ရာ ရရွိထားေၾကာင္းလည္း … Read more
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ကိုကြီးရယ်…သား ပစ္စည်းလေးတွေ ပြန်ကိုင်လို့ရပြီပေါ့နော် …
ကိုကြီး…သား ပစ္စည်းလေးတွေ…ပြန်ကိုင်ချင်တယ် နမည်က မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်အသက်(၂၁)နှစ်… လွန်ခဲ့သော (၁၀)နှစ်ခန့်… ကောင်လေး (၁၁)နှစ် အရွယ်… ရန်ကုန်မြို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တခုမှာ စားပွဲထိုးလုပ်ရင်း…ကြံရည်စက်ထဲ လက်ညှပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ပေးခဲ့ပြီ…တာဝန်ယူမှု မရှိပဲ…(၁၁)နှစ်ကလေးအား ဆေးရုံတွင် ပစ်ထားခဲ့တယ် ရွာသို့ ပြန်ရောက်…အဖေက ဆုံး…လောကဓံရဲ့ ရိုက်ချက်ကို အတော်ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေး ကျန်ခဲ့တဲ့ အမေ နှင့် ညီမလေး(၂)ယောက်တွက်…လက်တဖက်မရှိပေမဲ့…ဆန်အိတ်ထမ်းပြီ ရှာကျွေးခဲ့တယ် `ကိုကြီး…သား ခု ကိုကြီးကို ဆန် (၂)အိတ်အသာလေး ထမ်းပြလို့ရတယ်…မယုံရင် စမ်းပြရမလား ‘ ယုံပါတယ် ညီလေးရေ…ငါ့ညီ စိတ်လေးကို လေးစားပါတယ် ရွာမှာ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေရတာ အဆင်မပြေတော့…ရန်ကုန်သို့ တခေါက် ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ် ခု…တည်းခိုးခန်းလေး တခုမှာ တလ (၄)သောင်းနဲ့ …ဧည့်ကြိုလေး လုပ်နေရှာတယ် (ရသမျှ … Read more
အိမ်ထဲမှာတစ်ယောက်ထဲ TV ကြီးဖွင့်ပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတဲ့ အမေ့ကို မကြည့်ဘဲဖွင့်နေတဲ့ အကြောင်းမေးကြည့်တဲ့အခါ…
တီဗွီ ဖွင့်ထားပေးပါ ကျွန်တော့်အမေမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိပါတယ် TV ကို ၂၄နာရီ ဖွင့်ထားတတ်တာပါ ။ ထိုင်ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဖွင့်ထားပြီး လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်နေတာမျိုးပါ ။ ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တဲ့အခါ ကြည့်မယ့်သူမရှိဘဲ ဖွင့်ထားတာမို့ ကျွန်တော်က ပိတ် ,အမေက ပြန်ဖွင့်နဲ့ မကြာခဏ စကားများလေ့ရှိပါတယ်… အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးနောက်ဆုံး အမေ ပြောနေကျက… “နင် တို့နားမလည်ပါဘူး” တဲ့ … ကျွန်တော်အဲဒီတုန်းကတကယ်နားမလည်ခဲ့တာပါ .. တစ်ရက် …ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ခရီးထွက်ဖြစ်တယ်မိုင် (၄၀၀) လောက်ဝေးတဲ့ခရီးကို အသွားမှာ မောင်းနေတုန်းကဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အပြန်ခရီးမှာတော့ တစ်ယောက်ထဲ ကားမောင်းရတာဟာ သိပ်ငြီးငွေ့လာပါတယ် ။ အပျင်းပြေလို ပြေငြား ပီကေဝါးပေမယ့်လည်း ကားမောင်းနေရတာဟာသိပ်အထီးကျန်လွန်းပါတယ် ။ နောက်ဆုံး FM တွေဖွင့်တယ်။ဟုတ်တယ် ။ … Read more